Mihla le-Ukubukela kweApple kunye nokuKhangela kweArrhythmia | IPhone iindaba
Emva kweenyanga zokufunda, ingxelo epheleleyo sele ipapashiwe ezame ukuvavanya ukusebenza kwe-Apple Watch ekufumaneni i-arrhythmias, ngakumbi i-fibrillation ye-atrial, eyona ixhaphakileyo kubo bonke. ¿Yintoni iApple Watch enokuyenza kwaye ayinakuyenza? Ngaba lo msebenzi ubaxiwe kakhulu okanye ngokuchaseneyo? Njengogqirha kwaye ndinomdla kwitekhnoloji, ndikunika uluvo lwam koku.
Ukufunyanwa kwesigqi esingaqhelekanga kunye ne-ECG
Ukupapashwa kwe-NEJM kufundo lweStanford
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » Ngemihla- Ukujonga iApple kunye neArhythmia
I-Apple Watch inceda ukuphucula ubomi bomntu one-autistic